पत्याउनु हुन्छ ? चितवनमा बन्यो संसारकै महँगो ट्वाइलेट ! कति लाग्यो त यसमा खर्च ? हेर्नुहोस – – Life Nepali
पत्याउनु हुन्छ ? चितवनमा बन्यो संसारकै महँगो ट्वाइलेट ! कति लाग्यो त यसमा खर्च ? हेर्नुहोस –
काठमाडौँ । कोभिड-१९ को विश्व महामारीले अहिले सारा विश्वलाई नै त्रा’हिमाम बनाएको छ । यस महामारीबाट जोगिने आशामा विश्वको झण्डै एकतिहाई जनसङ्ख्या बन्दाबन्दीमा छ । सन् २०१९ को अन्त्यबाट सुरु भएको यस म’हामारीका कारण सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्र पुनः एकपटक पूर्णरूपमा थला पर्ने प्रारम्भिक अनुमानहरू आउन सुरु गरेका छन् । विश्व बैंक, आइएमएफ र अन्य निकायहरूले निकालेका प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरूले पनि विश्वमा पुनः एकपटक सन् १९३० को दशकभन्दा भ’यानक आर्थिक मन्दी आउने आँकलन गरेका छन् ।
चीनबाट ख्यालख्याल जस्तैगरी सुरु भएको र विश्वभरि डढेलोझैँ फैलिएको कोरोना भाइरसले अझै कति समय विश्वलाई थला पार्ला भन्ने आकलन गर्न सकिएको छैन । यसबाट कसरी जो’गिने भन्ने ध्याउन्नमा सबै छन् । धनी र बलिया भनिएका देशहरुलाई पनि कोरोनाले थला पारेको छ । हाम्रोजस्ता देशको त कुरै भएन ।
केहि महिना पहिले नै भरतपुरस्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय हेटौँडाले छा’पा मारेको थियो । अस्पतालका कर्मचारीले नै सामान ओसार्दै गरेको भिडियो विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले छापा मारेको घटना अझै ताजानै छ ।
अहिले उक्त शौचालयको तस्वीर मुलुकभर भाइरल भएको छ । सामाजिक सन्जालमा संसारकै महंगो शौचालय भरतपुरमा बनेको भनेर त्यसलाई प्रचार गरिएको छ । भरतपुर चितवनमा संसारकै महँगो २५ लाख ४४ हजार ५ सय ४८ रुपैयामा कोरोना अस्थायी उपचार केन्द्रको लागि बनेको त्यो पनि अस्थायी टोइलेट । घि’चौ साथी हो सक्दो घि’चौ ! जय भ्र’ष्टाचार ! जय सरकार !! सत्य तथ्य राम्रोसंग अध्ययन गरेर न्याय प्रेमिहरुले तत्काल अत्तियारमा जाहेरी हालौ ।
Previous पहिरो पी’डित धनबहादुरले भ’क्कानिदै पी’डा सु’नाए, ता’न्दा-ता’न्दै दुई छोरी र श्रीमतीलाई पु’र्यो’
Next मृ’त भनी दा’हसं’स्कार गरिएका व्यक्ति जी’वित भेटिपछि…